Gobolka Sanaag Gaarhayuu u baahan yahay | allsanaag
Gobolka Sanaag Gaarhayuu u baahan yahay
Gobolka Sanaag, guddi degaan oo Gaar haye ah ayuu u baahan yihiin.
Allah ha u naxariistee Garaad Maxamuud Cali Shire, inta la ogyahay Go’aan uu ka qaatay shidaal laga qodo Dawladiisii. wuxuu go’aankaas Garaadku gaaray dhamaadkii Kontonmeeyadii 1957 ama 1958. intii beelaha Soomaaliyeed ayna midoobin oo dawlad noqon sanadkii 1960.
Ceelka shidaalka ee ugu hadal haynta badan maanta ( Duruufo jira awgeed sheegi mayno halka uu ku yaalo) ayaa Garaadku shir uu gudoominayey uu go’aan daxal gal ah ka soo saaray.
Maanta ceelkii ayaa shirkado caalami ah xiisaynayaan, hase aaatee waxa meesha ka maqan Garaadkii go’aan qaadashada lahaa, Ardaagii Odayaasha Warsangeli ee xeel dheerayaasha ahaa oo la talin jiray iyo Gaarayihii ayaa meesha ka maqan. Garaadku, go’aanka ka sokow, hadalkaasi wuxuu noqday Dastuur dhaxal gal ah oo haddii loo baahdo dib loogu noqon karo.
Ugu danbayntii xogo badan oo aan ognahay iyo xiisaha Khayraadka gobolka Sanaag oo la doonayo in gacanta lagu dhigo, waxaan ugu baaqaynaa Bulshada gobolka Sanaag inay Guddi degaan oo deg deg ah samaystaan, oo dhulkan quruxda badan siday u dhaxleen Garaad Maxamuud Cali Sire iyo Caaqil Dhahar u gaarsiiyaan jiilka soo socda. Haddii Khayraadka gobolka la doonayo ay jiraan Guddi degaanka metesha
Dhalinyahay Dhamaanteen Dhulka Maw Shaqeynaa, Dhegxumada Ma Diidnaa
← Soomaali waa mid Yaa dawlad ahaa ka hor 1960.? →
2 thoughts on “Gobolka Sanaag Gaarhayuu u baahan yahay”
Makhiriyadda February 23, 2019 at 8:20 pm
ASC, Dhul Ilaahay waa ina siiyey laakin dadkisii (Inahom fii sibaaten camiiq) Ahlul kaaf bay ku biireen mindha.
Abdul March 4, 2019 at 8:24 pm
Maanshallah. Waxaa Ilaahay ku manaystay. Besha qiimaha badan ee uu ka dhashay AHN garaad maxud dhul hodon ah. Idinkoo leh dhulkaa iyo nimcada ku jirta miyad goaansateen inaad laba beelood hoos fariisataan oo dhulkina ay dalaalin ka noqdan. Ceebtaas waxa dhaxli doona jiilashina soo socda hadii aydan intay goori goortahay aydan is daba qaban.